Ilaa xagaagii 2018, Dekadda Seattle (Port) waxa ay ka caawinaysay Maamulka Duulimaadyada Federaalka (FAA) diyaarinta dib u eegista deegaanka ee Qorshaha Mashruucyada Muddada-Muddadan ee Madaarka Sustainable Sustainable Airport Mashruucyada Wakhtiga Dhaw (SAMP NTP) ee Madaarka Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma (BADDA). Marxaladda koowaad ee dib u eegista deegaanku waxa ay ahayd baaxadda taas oo la dhammaystiray 2019.
Marxaladda xigta ee geeddi-socodka dib-u-eegista deegaanka waa qabyo-qoraalka sharciga siyaasadda deegaanka ee Qaranka (NEPA) Qiimaynta Deegaanka (EA). Dekedda iyo Maamulka Duulimaadyada Federaalka (FAA) waxay go'aamiyeen in loo baahan yahay wakhti dheeraad ah si loo dhamaystiro falanqaynta loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha NEPA ka hor inta aan la daabicin SAMP NTP EA. Dekadda iyo FAA waxay ka wada shaqaynayaan sidii loo cusboonaysiin lahaa jadwalka SAMP NTP EA waxayna bixin doonaan macluumaadka ku saabsan sii daynta qabyada NEPA EA marka la helo.
Marka la dhammeeyo dib u eegista deegaanka NEPA, Sharciga Siyaasadda Deegaanka ee Gobolka (SEPA) dib u eegista deegaanka ayaa raaci doona. Ka dib marka SEPA la dhammeeyo, oggolaanshaha Komishanka ayaa loo baahan doonaa si loo bilaabo shaqada dhismaha ee mashaariicda.
Macluumaadka sidoo kale waxaa laga heli karaa English , العربية, Afsoomaali , Español, Iyo Tiếng Việt.
Gobolka Central Puget Sound waxa la filayaa in uu korayo hal milyan oo kale marka la gaadho 2035. Qorshaha Madaarka Sustainable Airport Master Plan (SAMP) waa naqshadaynta isbeddelada Madaarka Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma (SEA) si loo daboolo baahida mustaqbalka la saadaaliyay.
SAMP waxaa ka mid ah Mashaariicda Muddada-dhow ee SEA ee loo qorsheeyay in la dhiso marka la dhammeeyo dib u eegista deegaanka iyo ansixinta Guddiga. SAMP waxa kale oo ka mid ah Aragtida Muddada-dheer ee BADDA oo ay ku jiraan mashaariic aan u bislayn dib u eegista deegaanka wakhtigan, maadaama ay u baahan yihiin daraasad dheeraad ah oo aan si macquul ah loo arki karin. Kahor inta aan la fulinin mid ka mid ah Mashaariicda Aragtida-dheer, daraasado qorsheyn oo dheeri ah iyo habka ku habboon ee dib u eegista deegaanka ayaa la qaban doonaa.
Dekadda iyo FAA waxay sameynayaan daraasad ballaaran oo ku saabsan saameynta deegaanka ee suurtagalka ah ee mashaariicda SAMP ee Muddada-Muddada-dhow (NTP), iyadoo la raacayo Sharciga Ilaalinta Deegaanka Qaranka (NEPA), kaasoo u baahan ka-qaybgal dadweyne.
Dekedda iyo FAA waxay soo dhejin doonaan macluumaadka ku saabsan xilliyada ra'yiga dadweynaha marka ay soo dhawaato xilliga ra'yiga dadweynaha, ku casumida dadweynaha si ay fikrado uga dhiibtaan mawduucyada looga hadli doono dukumeentiga dib u eegista deegaanka, saameynta deegaanka ee suurtagalka ah ee NTP, iyo beddelaad macquul ah oo ka mid ah qorshaha la qorsheeyay. NTP
Marka dib u eegista deegaanka NEPA ay dhammaato, Sharciga Siyaasadda Deegaanka ee Gobolka (SEPA) dib u eegista deegaanka ayaa raaci doona.
Hadafka Ujeedada iyo Baahida waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka dib u eegista deegaanka. Baahida ayaa qeexaysa arrinta la xalinaayo. Ujeedadu waa xalka dhibaatada. Ujeedada iyo baahida ayaa loo isticmaali doonaa in lagu hago horumarinta beddelka ah ee lagu baranayo inta lagu jiro dib u eegista deegaanka.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma (SEA) waa agab gaadiid oo muhiim ah oo u adeegaya sidii xarunta gaadiidka hawada aasaasiga ah ee gobolka. Ujeedada Mashaariicda Muddada-Dhow waa in la wanaajiyo hufnaanta hawl-fulinta, habaynta koritaanka mustaqbalka, iyo in la bixiyo awood badan oo shidaal ah, oo ay ku jiraan shidaalka duulista waara.
Talaabada la soo jeediyay ayaa ah in la hirgaliyo Mashaariicda dhaw ee lagu tilmaamay SAMP, kuwaas oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​30 mashruuc oo wanaajin doona hufnaanta, badqabka, gelitaanka garoonka diyaaradaha, iyo tas-hiilaadka taageerada shirkadaha diyaaradaha iyo gegida dayuuradaha.